Wadahadalladii laga dhex waday Ahlusunna iyo Qoorqoor oo fashilmay | Dayniile.com
Home Warkii Wadahadalladii laga dhex waday Ahlusunna iyo Qoorqoor oo fashilmay
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanka Bohol oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ahlusunna ayaa sheegay in dadaalladii ay wadeen ee ku aadana in lasoo afjaro colaada in uu fashil kusoo dhamaaday.
Generaal Abshir Aadan labo Afle ayaa sheegay in dhammaan qodobadii ay wadeen in ay diideen Ahlusunna ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin wax wadahal ah oo ay la galaan maamulka Qoorqoor, maadaama dhawaan lagu qaaday dagaal Culus.
Waxaa uu xusay in hadda wixii ka dambeeya ay ka dhex baxeen , islamarkaana ay u taallo Ahlusunna iyo maamulka Galmudug sida laga yeelaayo xaaladda Ammaan ee deegaanka.
“Dadaal dheer ayaan sameynay saraakiil ahaan, waxaan Bohol joognay 12-maalmood si aan raga halkaas jooga uga baajino in dhiig dambe daato balse way naga diideen wax kasta oo aan xal ahaan u wadney iyagoo ku adkeystay aragti aan soconeynin oo uu horey u sheegay hoggaamiyohooda, waana kasoo laabaney.”
Previous articleGuushu waxaa ay u baahantahay oo Kaliya Xaq oo lagu taaganaada iyo inyaroo Dulqaad ah.
Next articleDowladda Jabuuti oo kasoo horjeesatay War kasoo yeeray Mareykanka
4 tii sano, Xildhibaankaagii makuu daneeyey mise waa kaa daneystay?
Waxkasta waxa ay leeyihiin xisaab xir iyo meel gunaanad ah oo lagu xaqiijiyo u jeedkii loo diray taabo galkiisa ama ku guul dareysigiisa!. Soomaaliya 4...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Ururrada Bulshada Rayidka uguna baaqay...
Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo baaq u diray Hir-Shabeelle & Puntland
Shirk u saabsan Nabadda iyo Isdhexgalka bulshada oo ka socda Magaalada...
The UN refugee agency in Palestine is facing a crisis of...
Major US airline CEOs have warned that 5G could cause some...
Diiwaangelinta Musharrixiinta kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta bilaabaneysa